အာဆင်နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(အာဆင်နယ် F.C. မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဒိုင်ယယ် စကွဲယား အဖြစ် ၁၈၈၆ခုနှစ်မှစ၍
ပီတာ ဟေးလ်ဝု( ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ။
အာဆင်နယ် ဘောလုံးကလပ် (Arsenal Football Club) ကို The Gunners ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး လန်ဒန်မြောက်ပိုင်း ဟော်လိုဝေး(Holloway, North London) တွင် အခြေစိုက်သော အင်္ဂလိပ်ကြေးစား ဘောလုံးကလပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်သည် ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် ပါဝင်ကစားသော အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကတွင် အအောင်မြင်ဆုံး ဘောလုံးကလပ်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ပထမတန်း နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ၁၃ ကြိမ်ရရှိခဲ့ဖူးပြီး အက်ဖ်အေဖလားကို ၁၄ ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး ကွန်မြူနတီဒိုင်း Community Shield ၁၆ကြိမ်ရရှိထားသည်။
အာဆင်နယ်ကို ၁၈၈၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း ပထမဆုံး အရေးပါသော ဆုတံဆိပ်ကို ၁၉၃၀ နှစ်များတွင် မှရရှိခဲ့ပြီး လိဂ် ချန်ပီယံ ၅ ခါဖြစ်ခဲ့ကာ အက်ဖ်အေဖလား ၂ ခုရရှိခဲ့သည်။ စစ်ပြီးခေတ်၏ ဆုတ်ယုတ်သော နှစ်များအပြီးတွင် သူတို့သည် ၂၀ရာစုအတွင်း ဖလား ၂ခုတစ်ပြိုင်တည်းရသော ဒုတိယမြောက် ကလပ်အဖြစ် ၁၉၇၀-၇၁ တွင် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့ပြီးသော အနှစ် ၂၀ အတွင်း အာဆင်နယ်သည် အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောက၏ အအောင်မြင်ဆုံး ကလပ်များတွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဆုဖလား ၂ခုရခြင်း နောက်ထပ် ၂ကြိမ်၊ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ကို ရှုံးပွဲမရှိရရှိခြင်း နှင့် ၂၀၀၅-၀၆ တွင် လန်ဒန်ရှိကလပ်များထဲမှ ယူအီးအက်ဖ်အေ ချန်ပီယံလိဂ်၏ ဖိုင်နယ်ပွဲကို ပထမဆုံးတက်ရောက်နိုင်သော အသင်းစသည့် မှတ်တမ်းများကို တင်ခဲ့သည်။
ကလပ်၏ အရောင်မှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အနီနှင့် အဖြူဖြစ်သော်လည်း ဤအရောင်များမှာ သမိုင်းကြောင်းတလျှောက် ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူပင် ကလပ်၏ တည်နေရာကိုလည်း အချိန်နှင့်အမျှ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် လန်ဒန် အရှေ့တောင်ပိုင်း ဝူးလ်ဝစ်ချ်(Woolwich) တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် မြောက်ဖက်ပိုင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းပြီး ဟိုက်ဘူရီ(Highbury) ရှိ အာဆင်နယ် အားကစားရုံသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သူတို့၏ လက်ရှိ နေရာဖြစ်သော ဟောလိုဝေး(Emirates) အနီးရှိ အဲမရိတ် အားကစားရုံသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။
၁၉၈၈၊ ၁၉၂၂၊ ၁၉၂၅၊ ၁၉၄၉၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်များတွင် တံဆိပ်များ ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း အာဆင်နယ်၏ အဓိကတံဆိပ်မှာ အမြောက်ပင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ တွင် အသင်း၏ ၁၂၅ နှစ်ပြည့်အတွက် တံဆိပ်ကို တပ်ဆင်ကြသည်။ ၁၈၈၆ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ တံဆိပ် ၁၀ ခုရှိသည်။ လက်ရှိသုံးနေသော တံဆိပ်မှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အာဆင်နယ်အသင်း၏ ဝတ်စုံများသမိုင်း
အာဆင်နယ်၏ အဓိကအရောင်မှာ အနီရောင်ပင် ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး မန်နာကွင်းကို သုံးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၈၉၀ မှ ၁၈၉၃ အထိ အင်ဗစ်တာကွင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သို့ ဝင်ပြီးနောက် ၁၈၉၃ တွင် မန်နာကွင်းသို့ ပြန်လာကာ ကွင်းသာသာရှိသောကွင်းကို ပွဲကြည့်စင်များဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ထိုကွင်းကို မြောက်လန်ဒန်သို့ မပြောင်းမီ ၁၉၁၃ အထိ နှစ်၂၀ ကြာအသုံးပြုခဲ့သည်။
အာဆင်နယ်၏ ဂန္ထဝင်အားကစားကွင်းဖြစ်လာမည့် ဟိုက်ဘူရီကွင်းတွင် ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ အစောပိုင်းကာလများသည် ပရိသတ် ၅၇၀၀၀ အထိဆံ့ကာ နောက်ပိုင်းတွင် အများဆုံး ၆၀၀၀၀ အထိဆံ့သည်။ ပရိသတ်များအတွက် နေရာများနှင့် ကြေငြာဘုတ်များအတွက် ကွင်းကို တိုးချဲ့ရန် ပြင်ဆင်ကြသော်လည်း မဖြစ်နိုင်တော့၍ ဟိုက်ဘူရီ၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် ကွင်းအသစ်ဆောက်ရန် ပြင်ကြရသည်။
လက်ရှိကွင်းအသစ်ဖြစ်သော အီးမရိတ် ဘောလုံးကွင်းကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးကာ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ရာသီတွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
လေ့ကျင့်ရေးကွင်းအဖြစ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ခဲ့သော ရှန်လေလေ့ကျင်းရေးကွင်းကို အသုံးပြုသည်။
အာဆင်နယ်အသင်းပရိသတ်များသည် ၎င်းတို့ကို "Gooners"၊ "Gunners" အမြောက်တပ်သားများဟု ဆိုကြသည်။ ပရိသတ်များသည် သစ္စာရှိကြပြီး ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ရာသီတွင် ပရီးမီးယားလိဂ်၏ ဒုတိယအများဆုံး လက်မှတ်ရောင်းရသောအသင်း ဖြစ်လာသည်။ လက်မှတ်ပေါင်း ၆၀၀၇၀ စောင်မှာ ကွင်း၏ ဝင်ဆံ့ဦးရေ ၉၉.၅% ဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်မှာ ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပတွင်ပါ ပရိသတ်များစွာ ရှိသည်။
အာဆင်နယ်သည် လိဂ်ချန်ပီယံ ၁၀ ကြိမ်အဖြစ် မန်ယူနှင့် လစ်ပါပူးနောက်၊ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖြစ် ပြောင်းပြီးချန်ပီယံ ၃ ကြိမ်အဖြစ် မန်ယူနှင့် ချဲဆီးနောက်တွင် တတိယအအောင်မြင်ဆုံးအသင်း ဖြစ်သည်။ အက်အေဖလား ၁၄ ကြိမ်ဖြင့် အအောင်မြင်ဆုံးအသင်း ဖြစ်သည်။ လန်ဒန်အသင်းများတွင် ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်နိုင်သော ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်ကာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်တွင် အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ၁၄ ဖြင့်သာ ရာသီသိမ်းဖူး၍ အကောင်းဆုံးအသင်းများထဲမှ တစ်သင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလမှ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ ၄၉ ပွဲရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခုနှစ် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအတွက် ၃၈ ပွဲလုံး ရှုံးပွဲမရှိဘဲ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ၁၈၈၈-၁၈၈၉ ခုနှစ်လိဂ်ပွဲတွင် ပရယ်စတွန်နော့အန့်၏ ၂၂ ပွဲရှုံးပွဲမရှိ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲအပြီးနောက် တစ်ခုတည်းသော ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်၏ ရွှေဖလား ကိုရရှိခဲ့သည်။
သီယာရီ ဟင်နရီမှာအသင်းအတွက် ၁၉၉၉ မှ၂၀၁၂ အထိ ၂၂၈ ဂိုး သွင်းယူပေးခဲ့သည်။
အမှတ်ပေးချန်ပီယံ − (၁၃) ကြိမ် (၁၉၃၀-၃၁၊ ၁၉၃၂-၃၃၊ ၁၉၃၃-၃၄၊ ၁၉၃၄-၃၅၊ ၁၉၃၇-၃၈၊ ၁၉၄၆-၄၇၊ ၁၉၅၂-၅၃၊ ၁၉၇၀-၇၁၊ ၁၉၈၈-၈၉၊ ၁၉၉၉၀-၉၁၊ ၁၉၉၇-၉၈၊ ၂၀၀၁-၀၂၊ ၂၀၀၃-၀၄)
အက်ဖ်အေ ဖလားချန်ပီယံ − (၁၃) ကြိမ် (၁၉၃၀၊ ၁၉၃၆၊ ၁၉၅၀၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၇၉၊ ၁၉၉၃၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇ ၊ ၂၀၂၀ )
ကားလင်းဖလား − (၂) ကြိမ် (၁၉၈၇၊ ၁၉၉၃)
ကွန်မြူနတီဒိုင်းချန်ပီယံ − (၁၅) ကြိမ် (၁၉၃၀၊ ၁၉၃၁၊ ၁၉၃၃၊ ၁၉၃၄၊၁၉၃၈၊ ၁၉၄၈၊ ၁၉၅၃၊ ၁၉၉၁၊ ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇)
recent transfers အတွက် 2017–18 Arsenal F.C. season#Transfers ကို ကြည့်ပါ။
၃ DF တီယာနေး
၃၅ FW မာတင်နယ်လီ
၈ MF ဆီဘယ်လော့
၉ FW လာကာဇတ်တီ
၁၁ MF တော်ရိုင်းရား
၁၀ MF အိုဇေးလ်
၂၆ GK မာတီနက်ဇ်
၁၄ FW အူဘာမီးယန်း (အသင်းခေါင်းဆောင်)
၁၆ DF ဟိုးဒင်း
၃၂ MF စမစ်ရိုး
၂၃ DF ဒေးဗစ်လုစ်
၂၉ MF ဂွမ်ဒိုဇီ
၂၀ DF မူစတာဖီ
၂၁ DF ချန်ဘာ
၁၉ FW ပီပီ
၂ DF ဘယ်လာရင်
၂၇ DF မာဗရိုပါနို့စ်
၃၄ MF ချာကာ
၁၅ MF မိတ်လန်းနိုင်းစ်
၃၁ DF ကိုလာစီနက်
၁ GK လီနို
၂၈ MF ဝီးလော့
၁၉၈၇ မှယနေ့ထိ နည်းပြ ၁၈ ဦး၊ ယာယီနည်းပြ ၆ ဦးရှိသည်။ ယာယီနည်းပြ ဖရက်ဒီယွန်းဘတ်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်​နိုဝင်ဘာလ၂၉ရက်​နေ့မှစ၍ ယာယီကိုင်တွယ်နေသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှ လက်ထောက်နည်းပြ စပိန်လူမျိုး မီခေးလ်အာတီတာကို နည်းပြချုပ် အဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခဲ့သည်
↑ UEFA Champions League Press Release (2011–12) (PDF)။ Union of European Football Associations။ 27 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Arsenal Crest | History | News | Arsenal.com
↑ Squad: First team။ Arsenal F.C.။ 15 January 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဆင်နယ်&oldid=646407" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။